अहिलेसम्म प्रेममा परेकी छैन : गायिका एलिना चौहान - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म सेलिब्रेटी अहिलेसम्म प्रेममा परेकी छैन : गायिका एलिना चौहान
पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी गायिका हुन्, ऐलिना चौहान् । सबै प्याटनमा गीत गाउन रुचाउने गायिका चौहान एकमात्र प्याटनमा गीत गाउँदा पछिसम्म चल्न गाह्राे हुन सक्ने बताउँछिन् । सांगीतिक क्षेत्रमा आउनुभन्दा पनि टिक्नुपर्ने चुनाैती रहेकाे उनी बताउँछिन् ।
Previous articleएउटै औषधिको मूल्य २५ करोड
Next articleकोरोना विरूद्धको खोप लगाउन अनलाइन फारम अनिवार्य, कहाँ कसरि भर्ने फर्म ?
मिडियालाई लक्षित गर्दै गायिका आस्था राउतको यस्तो स्टाटस